Cydia Packages တွေကို Computer ထဲဆွဲထုတ်ချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
Cydia Packages တွေကို Computer ထဲဆွဲထုတ်ချင်လို့
September 2011 edited September 2011 in iPhone
ကျွန်တော့် iPhone ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ Cydia Apps တွေကို PC ထဲ .deb files အနေနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်ချင်လို့ပါ။ Lockdown Pro, SBsettings , Zawgyi Font တိုု့ကို .deb files အနေနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်ချင်တာပါ။ တစ်ခြား iDevices တွေကို internet connection မလိုဘဲ ပြန်install ပေးချင်လို ့ပါ။ လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိရင်ကူညီပေးကြပါ။
September 2011 Registered Users, Moderators
iFile ဆိုတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ bro...တစ်ခုတော့ရှိတယ် router တစ်ခုတော့လိုတယ်...iphone ကလဲ အဲ့ router ကိုချိတ်ထားမယ်...Laptop ကလဲ router ကိုချိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အင်တာနက်ရှိစရာမလိုပါဘူး။ winscp ဆိုတာနဲ့လဲရပါတယ်။ iphone မှာတော့ openssh ဆိုလားမသိ မမှတ်မိတော့ အဲ့ဒါသွင်းထားဖို့လိုတယ်။ ၂မျိုးလုံးကတော့ router လိုပါတယ် ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့...
cyder ဆိုတဲ့ application လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါဦး။version-2အထိထွက်နေပါပြီ။
I am not sure if you can do that since deb files after installation may be deleted. try looking into this folder and see if there's any.
if there's none, you may have to redownload from cydia's reinstallation option to get the deb cached first. See the vid for instructions.
I believe cyder isacydia downloader which doesn't require any ios devices, i don't think that's what the thread starter's look for. Foragood file management tool for jailbroken devices, try ifunbox. It's much faster than those ssh based workarounds.